1. Ụdị convex ihu: a na -ekewa bit a n'ụdị abụọ, otu onye isi na ihu ngwụcha onye isi abụọ, a na -ejikarị nke ikpeazụ maka ntakịrị ihe nwere nnukwu dayameta. Ihe mmịfe ihu ihu nwere ike idobe oke mkpọtụ mgbe a na -egwu ala siri ike na nke siri ike. Agbanyeghị, ịdị na -egwu olulu adịghị mma, nke na -adabaghị maka injin injin na -achọ ihe dị ogologo maka olulu mmiri.
2. Ụdị ụgbọ elu ihu: ụdị mkpọtụ a na -adigide, dị mma maka igwu mmiri siri ike na oke okwute siri ike, yana dịkwa mma maka oke okwute siri ike na okwute dị nro nke nwere obere ịdị kwụ ọtọ chọrọ maka mkpọpu na oghere ịgba.
3. Ụdị ihu concave: enwere akụkụ cone concave na ihu ikpeazụ nke isi mkpọpu n'ụdị a. Ọ bụ ntakịrị ihe na -etolite ntakịrị mmetụta njupụta n'oge a na -egwu ala ka ọ nọgide na -arụ ọrụ nhazi nke bit. Oghere na -egwu ala nwere ịdị kwụ ọtọ. Ihe a na -egwu nwere ezigbo ntụpọ na -ewepụta ntụ na ọsịsọ ngwa ngwa, nke bụ ntakịrị ihe nwere ike ime nke na -eji ya eme ihe n'ahịa.
4.Depu concave center ụdị: ụdị bit a sitere na otu ụdị bọọlụ bit, na etiti ihu ikpeazụ nke bit nwere ebe concave miri emi. Ọ na -eji maka nucleation na -egwu ala usoro. Mgbe a na -egwu olulu miri emi, a na -ekwe nkwa izizi nke oghere ndị ahụ, ọ ga -adabara naanị maka igwu oke nkume dị nro na okwute siri ike.
Nke gara aga: Mgbanwe nke ọnụahịa DTH
Osote: Mmiri ọkpọ mmiri nke ọma C12FFFA4